Random Jokes | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Random Jokes
Posted by Don Juan Ronald on Mar 31, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 11 comments
မနက်ဖြန် ရွေးကောက်ပွဲ အ တွက် ဥပုသ် ဆောင့် မည် ၊ ထို့ကြောင့် ဒီ နေ့ သက် သတ် လွှတ် ၊ အ သား နဲ့ ပါတ် သက် တဲ့ အ ရာ မ ရေး ထား ပါ ၊ မည် သူ မ ဆို ဝင် ရောက် ဖတ် ရှု နိုင် ပါ သည် ။
အင်မတန် မှ အရေးကြီး ပြီး တန်ဖိုး အလွန် ရှိ လှ သော မဲ တစ် မဲ ကို ထည့် ဖြစ် အောင် သွား ထည့် ပေး ပါ ၊ သင့် မဲ ဖြင့် သင့် ရှေ့ရေး ကို ဆုံး ဖြတ် ပါ ၊ သူ တ ပါး ၏ မဲ ဖြင့် ကိုယ့် ရှေ့ ရေး ကို အဆုံးအဖြတ် မ ခံ ပါ နှင့် !!!
နေ ပူ စာ လုံ ရ အောင် ။
တရက်တ၌ သဂျီး ဦးKai သည် အိမ် ရှေ့ ပန်းခြံ လေး မှာ ပက်လက်ကုလားထိုင် ပေါ် လဲလျောင်း ၍ နေပူစာလုံ နေ သည် ။ သဂျီးကတော် Lady Kai က အိမ် တွင်း က နေ “ ကိုကို ရေ ! ဘာ လုပ် နေ တာ လည်း ? ” ဟု လှမ်း မေး လိုက် ပါ သည် ။
“ အိမ် က အဘိဓာန် နဲ့ စွယ်စုံကျမ်း တွေ ကို နေ ပူ လန်း နေ တယ် လေ ~ ” ဟု သဂျီး က လှမ်း ဖြေ လိုက် ပါ သည် ။( ဤ အတွက် ပွိုင့် သပ်သပ် ပေး ရန် မ လို)
တရက်တ၌ ဆရာ ကြောင်ကြီး သည် အိမ် ရှေ့ ပန်းခြံ လေး မှာ ပက်လက်ကုလားထိုင် ပေါ် လဲလျောင်း လျက် နေပူစာလုံ နေ သည် ။ ကြောင်ကတော် (ရုရှားမ)က အိမ် တွင်း က နေ “ Женщина выходит замуж ! чтобы привязать к себе мужчину ? ” ဟု ရုရှား လို လှမ်း မေး လိုက် သည် ။ ဗမာ လို ဘာသာ ပြန် လိုက်ရင် “ ကိုကြောင်ကြောင် ရေ ! ဘာ လုပ် နေ တာ တုံး ? ” ဖြစ် ပါ ၏ ။
“ А мужчина женится, чтобы женщина от него отвязалась ~~ ” ဟု ဆရာ ကြောင် က ရုရှား လို ပြန် ဖြေ လိုက် သည် ၊ ဗမာ လို တော့ “ စာအုပ်စဉ် ပေါ် က စာအုပ် တွေ ထုတ် ပြီး နေ ပူ လန်း နေ တယ် လေ ” ဖြစ် ပါ ၏ ။ ( ဤ အတွက် ကျေးဇူးတင် ရန် မ လို ပါ ၊ ရုရှားမ တဦးတည်း နဲ့သာ အမြဲတန်း ပေါင်းသင်း နေ ထိုင် သွား ရင် ဆို တော် ပါ ပြီ )
ထိုနည်း၎င်း ရွာ ထဲ မှ ဆရာမဲချော ၊ ဆရာသစ်မင်း…….စသဖြင့် အားလုံး သော ဆရာ့ဆရာ များ နှင့် အားလုံး သော ဆရာမ များ အသီးသီး နေပူစာလုံ ပြီး နောက်…… ။
တနေ့တ၌ ကျနော် သည် ရပ်ကွက် ပိုင် ပန်းခြံ ထဲ မှာ ၊ နေပူစာ လုံ ပြီး အိမ် အ ပြန် ၊ အိမ် က ဘွားတော် ( မိုင်ဝိုက်ဖ် ) က တံခါး ဝ မှ နေ ဆီးကြို ပြီး “ ဟဲ့ ! Ng Don ( ဗမာ လို ဘာသာ ပြန် လိုက် ရင် ၊ ငတုံး = ညံ့ဖျင်း သော ပုဂ္ဂိုလ် ) ၊ ဒါ က ဘယ် ကောင်မလေး နဲ့သွား သဝေထိုး ခဲ့တာ လည်း ? ” ဟု အော် မေး လိုက် သည် ။ ( မိန်းမ များ တွင် ဖြစ် လေ့ ရှိ သော ရောဂါ တ မျိုး )
“ လုပ်ပြန်ပြီ ၊ ဒီဘွားတော် ကလည်း ~ ငါ မင်း ကို ဘယ်နှစ်ခါ ပြော ပြီးပြီ လဲ ၊ ငါ့ ခေါင်း ပေါ် မှာ ကြာဇံ သင် မ က ၊ မြူစွမ် တွေ နဲ့ တောင် ပြည့် နေ ပြီ ဘဲ ဥစ္စာ ၊ ဘယ် ကောင်မလေး က များ ငါ နဲ့ လာ သဝေထိုး ဦး မှာ လည်း ၊ ငါ အ ခု လေး တင် ပန်းခြံ မှာ ကျမ်းမာရေး အ တွက် Vitamin D absorption သွား လုပ် ခဲ့ တာ ပါ ဗျာ ” ဟု လျှောက် ထား လိုက် ပါ သည် ။
( အသက်အရွယ် ကြီးရင့် လာ ရင် အရိုးဆွေး ရောဂါ မှ ကာကွယ် ရန် တဖက်တလမ်း မှ အထောက်အကူ ဖြစ် စေ ဖို့ နေရောင်ခြည် မှ Vitamin D ဓါတ့် ရ ယူ ရန် အတွက် နေပူစာ မကြာခဏ လုံ ပေး ရ ပါ သည် ဟု ဆရာဝန် များ က အကြံပြု ထား ၏ )
လွန် ခဲ့ သော ၄၇ နှစ် လောက် က စစ်အစိုးရ သည် ကျနော် တို့ ရဲ့ တရုတ် စာသင်ကျောင်း ကို လု ယူ သိမ်း ပိုက် လိုက် ပြီး နောက် ၊ ကျနော် သည် ပုဆိုး ဝတ် သော ဗမာ ကျောင်းသား ဘဝ သို့ ရောက် ရှိ လာ ပါ တော့ သည် ။ အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် ဗမာစာ မှာ အံ့သြော လောက် အောင် ညံ့ဖျင်း တဲ့ အကျွန်ုပ် ၊ ၁၀ တန်း ကို ယောင်လည်လည် နဲ့ ရောက် ရှိလာ သည့် အခါ ဆက်လက် ၍ ယောင် နေ လို့ မဖြစ် မှန်း ကောင်းကောင်း ကြီး သိ လာ ပါ သည် ။
အတန်း ပိုင် ဆရာ သည် အင်္ဂလိပ်စာ အသင်အပြ ကောင်း သော နာမည် ကြီး ဆရာ ဖြစ် သော် ငြား လည်း ၊ သူ သည် ဗိုလ် လို ဘဲ မှုတ် ပြီး သင် သည့် အ တွက် ကျနော့ လို မျိုး အခြေ ခံ မကောင်း သော ကောင် အတွက် ဆရာ ၏ အစွမ်း သည် ကျနော့ အတွက် ဒုက္ခဝေတနာ သာ ဖြစ် ပါ သည် ၊ အဲဒီ ခေတ် မှာ ကျူရှင် ဆို တာ ဘာ လည်း တောင် မ သိ တဲ့ ခေတ် ၊ ကျနော်မျိုး ဒီ တသက် လုံး ၁၀ တန်း အောင် ဖို့ မ မျှော်လင့် တော့ ပါ ။
စာသင်နှစ် တ ဝက် ခန့် ချိုး သွား သော အ ခါ ၊ ဘေး အတန်း စာသင်ခန်း မှ အမျိုးသမီး သူငယ်ချင်း (gril friend လုံးဝ မဟုတ် ပါ ၊ ဘုရား ဆူး ၊ ယခု အခါ သူမ သည် ဆရာဝန်များ ၏ အမေ အဖြစ် ဖြင့် ဗမာပြည် တွင် ပျော်ရွှင် စွာ ရှိ လျက် ပါ ) က ၊ သူမ အား တခြား အတန်း စာသင်ခန်း မှ အင်္ဂလိပ်စာပြ ဆရာမ သည် ၎င်း ဆရာမ ၏ အိမ် မှာ စာ သင် ပေး မည် ၊ ကျနော့ ကို လိုက် မ လား ဟု မေး လာ သည် ၊ ဘုရားသခင် ၏ ကျေးဇူးတော် ကြောင့် ကျေးဇူးရှင် ကြီး များ နဲ့ တွေ့လိုက် ပါ ပြီ တကား ။
ဆရာမ သည် ၁ မိုင် ကျော် ခန့် ဝေး သော ပြည်တော်သာ တိုက်ခန်း ( ဦးနု ခေတ် တွင် တည် ဆောက် ခဲ့ သည်) တွင် နေ ထိုင် ပြီး ၊ နံနက် ၅:၃၀ အရောက် ၆ နာရီ မှ ၇:၃၀ ထိ ကျနော် တို့ အားလုံး ပေါင်း ၄ ယောက် ကို စာပြ ပေး ပါ သည် ။
တပါတ် ခန့် ကြာ သော အခါ တနေ့ နံနက် မိုး သည်း ထန် စွာ ရွာ နေ ပြီး ၊ ဒီဇင်ဘာလ လည်း ဖြစ်သည့် အ တွက် အလွန် ချမ်း လည်း ချမ်း ၊ စို လည်း အလွန် စို သည် ၊ ကျနော် တ ယောက် တည်း ဆရာမ အိမ် ရောက် သွားသည် ၊ နောက် တ ရက် လည်း မိုး ရွာ ၍ ကျနော် တ ယောက် တည်း သာ သွား သည် ၊ ဆရာမ သည် ကျနော့ ကို သတိထား မိ သွား ပြီး ၊ သနား လည်း သနား သွား ပါ သည် ။
“ ကလေး ကို ကြည့် ရ တာ တော် တော် လေး တတ် ချင် နေ တာ နဲ့ တူ တယ် ” ဆို ပြီး ကျနော့ စာအုပ် ကို ယူ ကြည့် လိုက် တယ် first person , second person , third person တောင် မ ခွဲ တတ် တာ တွေ့ ရှိ တော့ အရမ်း အံ့သြော ပြီး လန့် လည်း လန့် သွား ပါ သည် ၊
“ ကလေး က အခြေနေ သိပ် ဆိုး တာ ဘဲ ၊ နင့် ကို ငါ တတ် အောင် တော့ မ သင် ပေး နိုင် တော့ ဘူး အချိန် မ ရှိ တော့ ဘူး ၊ အတတ် နိုင် ဆုံး စာမေးပွဲ ကို အောင် နိုင်အောင် တော့ သင် ပေး လိုက် မယ် ၊ နင် ကောင်း ကောင်း လေး ကြိုး စား နော် ၊ အား မ ငယ် နဲ့ ” ဟု ကျနော့ ကျေးဇူးရှင်ကြီး ဆရာမ သည် ထို နေ့ မှ စ ၍ စေတနာ အပြည့် ဖြင့် စာ သင် ပေး လေ တော့ သည် ။
ကျနော် သည် ဆွေမျိုး များ ထဲ တွင် ထို ကာလ ၌ ၁၀ တန်း ကို တ ကြိမ်း တည်း ဖြေ ရုံ နဲ့ အောင်မြင် ခဲ့ သော တ ဦး တည်း သော ကျောင်းသား ဖြစ် ပါ သည် ။
အောင်စာရင်း နှင့် အမှတ်စာရင်း ထွက် လာ တော့ ကျေးဇူးရှင်ကြီး ဆရာမ က “ ဟဲ့ ! ပေါ်ဦး ! မင်း ကို မင်း အထင် မကြီး နဲ့ နော် ၊ မင်း အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့ ဗမာစာ နှစ် ဘာသာ ပေါင်း မှ အမှတ် ၈၀ ရ တာ ၊ ဂုဏ် ထူး ထွက် တယ် များ အောင့်မေ့ မ နေ နဲ့ ၊ တကယ် တန်း မင်း ၇၇ ၊ ၇၈ မှတ် လောက် ဘဲ ရ တာ ၊ စာ စစ် တဲ့ လူ က မင်း ကို သနား လို့ အမှတ် တိုး ပေး လိုက်တာ နို့ မ ဟုတ် ရင် ကျ ပြီ သာ မှတ် တော့ ” ။
ကျနော် လည်း ကို့ ကိုယ် ကို ကောလိပ် မ ရောက် သင့် ဘဲ မတော်တဆ ရောက် သွား ချင်း ကို ကောင်းကောင်း သိ ပါ သည် ၊ ထို့ ကြောင့် နောက် ပိုင်း နဲနဲပါးပါး တော့ ဆက် ကြိုးစား ခဲ့ ပါ သည် ၊ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဆို တာ အမြဲ သုံး နေ မှ ၊ မ သုံး ဖြစ် ရင် မေ့ လွယ် သည် ၊ကိုယ့် ဘာသာ မှ မ ဟုတ် တာ ။ ခု လောက် ဆို ၄ ပုံ ၃ ပုံ လောက် ဆရာ၊ဆရာမ များ ထံ ပြန် ပေး လိုက် ပါ ပြီ ၊ ဒီ တခါ ဗမာ ပြည် ပြန် ရင် ပြန် အန်း ခိုင်း လိုက် အုံး မှ ဘဲ ။
ယခု ကျနော် ကြိုးစား ပန်းစား ရေး ထား တဲ့ အင်္ဂလိပ် အက်စေး လေး တ ပုဒ် ကို ရွာ ထဲ မှ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာ ၊ ဆရာမ များ ကျေး ပြု ၍ စစ်ဆေး ပေး ပါ ဦး ။
An older lady likes beauty
One day my wife was wearing her new dress that she bought from the bazaar and asked me whether it is fit for her.
I pretended very amazing and said “oh! Great ! You look younger about 60 years !”
She glad and smile then said “Don’t kidding, I am serious” .
In the meanwhile my son was rush out from his room and shouted “Mom! Don’t believe Dad, he is meaning you are immature, you see if take off 60 years from your real age, you are justachild that only3years old, it is mean you are childish”.
Then my wife is gazing at me and said “ $%^#*&@#$%^&” .
Actually she wants to say “Oh! God! Thank you for giving me suchahumorous husband and marvelous son” .
I always belive every lady like beauty and feeling their younger even though an older one .
ကျနော် က “ မင်း အ သက် ၆၀ လောက် ငယ် သွားတယ် ” လို့ ပြော ချင်တာ ၊ ဒီ “ You look younger about 60 years ! ” လို ရေး တာ ကတိကအောင့် ဖြစ်နေ ပါသည် ၊ ဘယ် လို မှ စဉ်းစား မ ရ ပါ ၊ ကျေးဇူး ပြု ၍ မ စ ပေးပါ ခင်ဗျား ~~
Correction လုပ် ပေး သော ကျေးဇူးရှင်များ ကို ကျနော်မျိုး Fly Kiss ၃ ခု တိတိ ဖြင့် ကျေးဇူး ဆပ် ပါ မည် ဖြစ်ကြောင်း ~~~
** ကျနော့ တကယ့် ကျေးဇူးရှင် အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမ နှင့် gril friend မဟုတ် သော အမျိုးအမီး သူငယ်ချင်း ကို ဘဝ တသက် တာ မှာ အမြဲ သတိရ နေ ပြီး ၊ ဂါရဝပြု ကန်တော့ ပါ သည် ၊ သူ တို့ နဲ့ မ တွေ့ ခဲ့ ရင် ကျနော် ဒီ နေ့ ဒီမှာ နှောက်တီးနှောက်တောက် ရေး နိုင် လိမ့် မည် ဟု မ ထင် ပါ ။ **
ရွှင် လန်း ချမ်း မြေ့ ပါ စေ ~~~
My dear Don Juan Ronald
I’m here now for night duty .
So, i’m don’t understand for your essay.
ကြာဇံကြော်တွေနဲ့ အူးလေးကြီးရဲ့ ဖလိုင်းကစ် ကို မလိုချင်သေးလို့ ၊ မပြင်သွားပါဘူး ခင်ဂျ ။ (ဟီး…အမှန်က မတတ်လို့ )
အကျနုပ်ဖြစ်သော ငတာတီးငယ် သည်လည်း မတတ်သဖြင့်
ကွေ့ရှောင် ဝေ့ဝိုက်လျက် ဆုတ်ခွါ ထွက်ပြေး အဝေးသို့သွားပါမည်….
ပိုစ့်ထဲကရုပ်ပုံလေးတွေ ဘယ်ကယူထည့်တယ်ဆိုတာ အရင်က ပိုစ့်တပုဒ်မှာပြောဘူးတာ မှတ်မိပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကတော့လဲ မလိုချင်လို့ မှတ်မထားမိဘူး။ အခုလိုချင်တော့ အဲဒီပိုစ့် ပြန်ရှာမတွေ့တော့ဘူး။
အဲဒါ .. ဘယ်ကယူပြီး ဘယ်လိုလုပ်ထည့်ရတယ်ဆိုတာလေး စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ပြန်ပြောပေးပါဦး။
(ကိုရော်နယ်ရေးတဲ့စာကိုလဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဖတ်ထားတာနော်.. )
ဆရာ ဦးပါလေရာ ခင်ဗျား~~
ဖတ် ပေး တာ ကျေးဇူး တင် ပါ သည် ၊ အ ထူး သ ဖြင့် စိတ် ရှည် ရှည် နဲ့ဖတ် တာ ကို ကျေး ဇူး ပို တင် ပါ သည် ။ တော် တော် မော သွား မှာ ပေါ့ နော် ( ဖတ် ရ ခက် လို့)
ရုပ် ပုံ လေး တွေ က တရုတ်ကြီး များ ရဲ့ web site ထဲ က cctv မှ ယူ ထား ချင်း ဖြစ် ပါ သည် ၊
ပြော ရ ရင် ရှက် စရာ ကောင်း တယ် ၊ ကျနော် link လည်း မ ထည့်တတ်ဘူး ၊ နို့ မ ဟုတ်ရင် link လုပ် ပေး လိုက်မယ် ။
ရော်နယ်လို့ မခေါ်နဲ့ U Don လို့ခေါ်ရဒယ်။ အူဒွန်ဆိုတာ ဂျပန်ဂျုံခေါက်ဆွဲကိုခေါ်တာ။ ဦဒွန်ရေးတဲ့စာကို ပြင်ပေးရရင် “ မင်း အ သက် ၆၀ လောက် ငယ် သွားတယ် ” ဒီလိုရေးရဒယ်..
King’s age about 60 young go. [em:23:] [em:23:] [em:23:]
ဆရာ ကြောင် ကြီး ခင်ဗျား ~~
ယ ခု လို April Fool နေ့ ထူး နေ့ မြတ် ကြီး မှာ ၊ ယ ခု လို ပြင် ပေး တာ ကို ၊ အ ထူး အကျိုး ပြု သည့် အ တွက် ၊
အာလိကားဒို့၊ကော်ဇိုက်ယိမားစ် ပါ ဘဲ ~_~ ~_~ ~_~ !
အူဒွန် .. ရန်ကုန်ပြန်လည်ရင်တော့ ရွာသူတွေ သတိထားနော် .. အူဒွန်ကြာဇံတွေ ယူပြီးချက်ပြလိုက်ကြဦးမယ်.. :grin:
ဒီနေ့တော့.. နေပူစာနေနေသာသာ.. နေရောင်ကို မမြင်လိုက်ရဘူး..
နယူးယောက်လည်း.. အဲလိုပဲနေမှာ… :?
အဲဒါကြောင့်..အနောက်တိုင်းက.. ရုရှားမလည်း.. နေမထိ..လေမထိ… အရေပြားပါးပြီး.. ပန်းနုရောင်ဖြစ်နေတာပေါ့..။
မြန်မာပြည်ခေါ်သွားရင်.. အဖြူမတွေက.. အရေပြားရောဂါ(ကင်ဆာ) ဖြစ်တတ်တယ်..။
မတတ်ပဲ ဖော်ကောင် လုပ်လိုက်ဦးမယ်။
Ronald = ရော်နယ်
တုံကျွမ်းရော်နယ် လို့ အသံထွက်ရင် မှန်မလား ဆရာကြီး ခင်ဗျား။
တရုတ်ပေါ်ဦး ဆိုလို့ မြန်မာ အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး ကို သတိရမိတယ်။
ဘာနဲ့လဲ.. ဆား နဲ့ပါဘုရား ဆိုတာ တော်တော် ကို အထင်အရှား အမှတ်ရစေခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
ဘဘ တရုတ်ပေါ်ဦး လည်း မှတ်ဥာဏ်ကောင်းပြီး ဇ၀န ဥာဏ် ထက်သန်မယ် ထင်တယ်။